အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေကန်ထဲက ဆား
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, July 08, 2010 Thursday, July 08, 2010 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
တစ်ခါတုန်းက ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီး အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ ပညာရှိကြီးတစ်ဦး ရှိပါတယ်… သူဟာ တစ်နေ့မှာတော့ အိမ်မီးလောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာရာကို ဆုံးရှုံးသွားလို့ စိတ်ပျက်အားလျော့စွာနဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးပြီး ငိုကြွေးနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဆီ ရောက်လာပါတယ်.. ပညာရှိကြီးက ထိုလူငယ်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက် သွားယူခိုင်းပြီး ဆားတစ်ဆုပ်ကိုလဲ ယူလာခိုင်းပါတယ်.. ရေဖန်ခွက်ထဲကို ဆားတစ်ဆုပ် ထည့်လိုက်ပြီး ရောမွှေလိုက်ကာ ထိုလူငယ်ကို သောက်စေပါတယ်.. ပြီးတော့ ဘယ်လိုအရသာမျိုး ရှိသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ထိုလူငယ်က “ခါးတူးနေအောင် ငံပါတယ်”. လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်..
ဒီတော့ ပညာရှိကြီးက အသာပြုံးလိုက်ရင်း ထိုသူကို ဆားတစ်ဆုပ်ကို ယူလာခဲ့ပါလို့ ခိုင်းလိုက်ပြီး သူနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ဖို့ မြို့ပြင်ဘက်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်. မြို့အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်လာကြရင်း အလွန် ကျယ်ပြောပြီး ကြည်လင်လှတဲ့ ရေကန်ကြီးတစ်ကန်နား ရောက်လာကြပါတယ်.. ဒီအခါမှာ ပညာရှိကြီးက ထိုလူငယ်လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဆားတစ်ဆုပ်ကို ရေကန်ထဲ ပစ်ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်..
ပြီးတော့ လူငယ်ကို “ကဲ အခု ကန်ထဲကို ရေကို သောက်ကြည့်ပါဦး” လို့ ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ ထိုလူငယ်ကလည်း ကန်ထဲကရေကို လက်ခုပ်နဲ့ ခပ်ယူပြီး သောက်လိုက်ပါတယ်.. ပညာရှိကြီးက လူငယ် ရေသောက်ပြီးတဲ့အခါ “အခုရော ကန်ထဲက ရေက ဘယ်လိုအရသာ ရှိသလဲ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ လူငယ်က “ လတ်ဆတ်ပြီး ချိုမြတဲ့ သောက်ရေရဲ့ နဂိုအရသာ အတိုင်းပါဘဲ” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်.. “စောစောတုန်းက ရေခွက်ထဲကို ဆားထည့်ပြီး သောက်လိုက်သလို ငံသေးရဲ့လား” လို့ ပြန်မေးပြန်တဲ့အခါ “ မငံတော့ပါဘူး.” လို့ လူငယ်က ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်..
ဒီတော့မှ ပညာရှိကြီးဟာ လူငယ်လေးရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပုခုံးကို အသာအယာပုတ်လိုက်ကာ “ငါတို့ဘ၀တွေရဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှု၊ ဆုံးရှုံးခါးသီးမှုတွေဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ဆားနဲ့တူပါတယ်.. ဘ၀မှာ ကြုံလာတဲ့ နာကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ခံစားရတဲ့ အတိုင်းအတာဟာ မင်းက ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့ ခံယူမလဲ ဆိုတာနဲ့ဘဲ သက်ဆိုင်တယ်.. . မင်းက ခွက်သေးသေးနဲ့ ခံယူမယ်ဆိုရင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကို သိပ်ကို ကြီးမားတယ် လို့ မင်းထင်လိမ့်မယ်.. ရေကန်လို ကျယ်ပြောလှတဲ့ ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ခံယူမယ်ဆိုရင် အဲဒီဆုံးရှုံးမှု၊ စိတ်ထိ ခိုက်နာကျင်မှုတွေဟာ ဘာမှ ပြောပလောက်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်နာကျင်မှု မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့…”
“ဒီတော့ ဘ၀မှာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နာကျင်ခါးသီးတာတွေ ကြုံလာတိုင်း ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖန်ခွက်တစ်လုံး မဖြစ်စေပါနဲ့.. ရေကန်တစ်ကန်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်ကြံလိုက်ပါ.. ဒီလိုဆိုရင် နာကျင်ခံစားနေရတာတွေဟာ ရေကန်ထဲရောက်သွားတဲ့ ဆားတစ်ဆုပ်လို လျှော့ပါး သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်..
ဒီဥပမာလေးကို သဘောကျလို့ ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်ရှင်.. ကျွန်မတို့လဲ ဘ၀မှာ ကြုံလာတဲ့ ခါးသီးနာကျင်မှုတွေကို ရေဖန်ခွက်လေးနဲ့ မခံယူဘဲ ရေကန်ကြီးနဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်လှတယ် မဟုတ်ပါလားနော်..
The taste of life ( Unknown Author) ကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
32 Responses to “ရေကန်ထဲက ဆား”
ကျွန်တော်လည်း ခါးသီးတဲ့ခံစားမှုဆိုရင် ခေါင်းထဲကြာကြာမထားဖူး
July 8, 2010 at 9:03 PM
တကယ်ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးပါပဲ အစ်မရေ...မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ငါက ဖန်ခွက်တစ်လုံးလား..? ရေကန်အဖြစ် ဘယ်တော့ ခံယူခွင့်ရမလဲ..?
ရေကန်မဖြစ်ခင်စပ်ကြား ဖန်ခွက်ဘ၀နဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနေသူလား...?
July 8, 2010 at 9:51 PM
July 8, 2010 at 11:08 PM
လောက ကြီးက ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို မဖြစ်ပဲ သူ ဖြစ်ချင်သလိုပဲ ဖြစ်နေတတ် တော့ 
အမြဲ တန်း ပဲ ကြုံတွေ့နေရမဲ့ဆုံးရှုံး မှု တွေ ကို ဒီလို နည်း နဲ့ ပဲ ဖြေသိမ့် 
နေရ တော့ မှာပါပဲ။ သိပ် ကောင်း တယ်ဗျား......
July 8, 2010 at 11:43 PM
စာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲ ...။ ခုလိုရသစာတွေ ဒဿနာစာတွေ မကြာခဏတင်ပေးတဲ့ ညီမချောကို စာဖတ်သူ အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
July 8, 2010 at 11:49 PM
ဥပမာလေး သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ...။ စဉ်းစားစရာလေးတွေပေါ့...။
မချောရေ... တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ပို့စ်လေးပါဘဲ။ လူတိုင်း ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ငါမှ ပိုပြီးဆင်းရဲတယ်၊ ငါမှ ပိုပြီးဘ၀နာတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။ အမှန်က လူသားတိုင်း အနည်းနှင့်အများတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ကြုံဖူးကြသူတွေချည်းမဟုတ်လား။ ခံယူပုံချင်းသာ ကွာကြတာလေ။ အမှန်က ဖန်ခွက်နှင့်မခံယူဘဲ ရေကန်နှင့်ခံယူသင့်တာ။
July 9, 2010 at 12:43 AM
July 9, 2010 at 1:08 AM
အင်းးး... ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ခံယူနိူင်အောင် ကြိုးစားမှ ဖြစ်မယ် ချောရေ... ကိုယ်က ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျမှာ မို့ပါ .။ ဒီပိုစ့်ကို သိပ်ကြိုက်တယ် ။
July 9, 2010 at 1:46 AM
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ် လေးပါ။ ဘ၀မှာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နာကျင်ခါးသီးတာတွေ ကြုံလာတိုင်း.... ရေကန် နဲ့တင် မဟုတ်ပဲ.. မြစ်ကြီး တစ်စင်း အနေနဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါအုံးမယ်...
July 9, 2010 at 2:13 AM
July 9, 2010 at 6:13 AM
ဆားလေး တစ်ထုတ်ရလာ ရင် ရေကန်ကြီးလောက် ကျယ်တဲ့ ရေပြင်ထဲ မထည့်နိုင်ရင်တောင် ခွက်ကလေးတွေ အများကြီး ထဲ မျှထည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့် တာပေါ့။ အကန့်လေးတွေ သူအပိုင်းနဲ့ သူပိုင်းထားပြီး ဖြေရှင်းလိုက်မယ်။
ကျေးဇူးပဲ မချော ရေ ...
July 9, 2010 at 2:40 PM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဥပမာလေးပါပဲ . . . မှန်တယ် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ် ခံယူနိင်ဖို့ လုပ်ရဦးမယ် . . .ကျေးဇူး မချော
July 9, 2010 at 2:59 PM
တကယ်ကောင်းတယ် မမချောရေ.... မှတ်သားသွားပါတယ်... ဟုတ်တယ်နော် တခါတလေ အရမ်းခံစားနေရင် ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်လိုက်တဲ့ ဆားထုတ်လိုပဲနော်... စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံလာတိုင်း မမချောရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို သတိရမှပဲ... ကျေးဇူးပါမမချောရေ...
ဖတ်လိုက်ရတာ ကျေးဇူးပါ..စိတ်ညစ် စရာတွေရှိရင် ဒီလိုဘဲ ဖြေသိမ့်ရမှာနော်
July 9, 2010 at 5:18 PM
ဘ၀မှာ စိတ်ညစ်စရာကြုံလာတိုင်းမချောရဲ့စာလေးကိုအမြဲမှတ်မိနေမှာပါ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချော.။
July 9, 2010 at 6:03 PM
ကဲ...မမရေ...ညီမလေးကတော့ ရေကန်တို့ ပင်လယ်တို့ပါမက သမုဒ်ဒရာကြီးဖြစ်အောင်ကို ကြိုးစားလိုက်တော့မယ်နော်။
ရင်ဘတ်ထဲ ဒလဟော စီးဝင်လာသံကြားတယ်
July 9, 2010 at 7:37 PM
ဥပမာ လေးကတော့ အရမ်းကို ကောင်းလွန်းပါတယ် အစ်မရေ...
ရေသန့်said...
July 9, 2010 at 9:51 PM
အတွေးလေး တင်ပြထားပုံအရမ်းကောင်းတယ် မချောရေ...
ညီမလည်း ရောက်ရောက်ချင်း ပြဿနာပေါင်းစုံကိုရှင်းနေရလို့...
July 9, 2010 at 11:48 PM
အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ထဲကို ရောက်တိုင်း အမောပြေစရာကလေးတွေ ချည်းပါပဲလား ......
July 10, 2010 at 1:55 AM
ရေငတ်နေတဲ့ အချိန်မှာသောက်ခွင့် ရလိုက်တဲ့ ရေတစ်ခွက်လိုပါပဲ အမရယ်။ အမရဲ့ post လေးကိုဖတ်ပြီး အပူတွေ တစ်ဝက်လောက်လျှော့ သွားရပါတယ်။
July 10, 2010 at 2:02 AM
သေသေချာချာကို ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် မချော။
July 10, 2010 at 6:28 AM
July 10, 2010 at 4:46 PM
ထပ်မှတ်သွားပါတယ် မမချော ကျေးဇူးပါနော်..
ရေခွက်နဲ့ ရေကန် ရွေးတာတော့ ဖြစ်နိင်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မထိန်းချုပ် နိင်တဲ့သူ အတွက်ဆိုရင်တော့ နာကျင်ခံစားတဲ့ ခွက်ရဲ့ အကြီးအသေး ပမာဏ ကို ရွေးချယ်ဖို့ ခက်နိင်တယ်။ ဒီပို့စ်လေးထဲက ဥပမာကို သိထားလိုက်ရင်တော့ ခံနိင်ရည် သက်သာ အောင် ဖန်တီးသွားနိင်မှာပါ။